मूल्य नपाउँदा उत्पादन रोकियो - Naya Sanchar Naya Sanchar
३० कार्तिक २०७७, आईतवार १६:२८
बलेवा । ठूला अनि मुलायम देखिने पात । देख्दै खाउँ खाउँ लाग्ने रायोको साग बागलुङ बजारमा देखियो भने धेरैले सोध्थे कहाँको साग हो ? सदरमुकाम बागलुङ बजारदेखि केही पर रहेको बागलुङ नगरपालिका–११ रायडाँडामा उत्पादन हुने साग बागलुङ बजारका तरकारी पसलहरुमा सजिँदा मुहार नै फेरिए जस्तै हुन्थ्यो ।
अँगालोमा बोक्नु पर्ने गरी सप्रिएका साग किसानले डोकोभरि बोकेर ल्याउँथे । बजारमा रायडाँडामा साग निकै रुचाइन्थ्यो तर यो वर्ष रायडाँडामा रायोको साग फलेन ।
किसानले रायोको साग लगाउने बारीमा कोदो लगाए । कोदोको उत्पादन लिएपछि गहुँ लगाउने तयारीमा किसान छन् ।
वर्षौं पहिलेदेखि रायडाँडामा रायोको साग खेती हुन्थ्यो । पछिल्ला केही वर्षयता यहाँका झण्डै २० परिवारले रायोको सागलाई आम्दानीको राम्रो स्रोत बनाएका थिए । रायो फल्न छोडेर यहाँका किसानले खेती नगरेका भने होइनन् ।
उपभोक्ताले निकै रुचाउने सागको मूल्य बिचौलियाका कारण निकै कम भएपछि यहाँका किसानले यो वर्ष साग नलगाएका हुन् ।
“अघिल्लो दिन रू ३५ किलोमा बेचेको साग भोलिपल्ट पठाउँदा व्यापारीले रू १० बनाइदिए, उनीहरुले प्रशस्तै नाफा खाने हाम्रो मालको मूल्य परेन”, लामो समयदेखि रायो सागको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका दलबहादुर थापाले भन्नुभयो, “बिचौलिया मोटाउन किन दुःख गर्नु भनेर यस वर्ष सबैको सल्लाहमा साग लगाएनौँ ।”
दलबहादुरले मात्रै वर्षमा ८० क्विन्टलसम्म साग बिक्री गर्दै आउनुभएको थियो । उहाँजस्तै रायो फलाउने रायडाँडामा २० परिवारभन्दा धेरै छन् ।
गाउँका अन्य केहीले व्यावसायिक नभए पनि घर खर्च चलाउने गरी साग फलाउँथे । “यहाँबाट ढुवानी गरेर बजार पुर्याउन किलोको रू चार भन्छन्”, थापाले भन्नुभयो, “बल र मलको मूल्य खोई ? बरू कोदो लगाएर खान त पुग्छ ।”
रायडाँडामा पानीका स्रोत प्रशस्त रहेको र रायोको सागका लागि उपयुक्त माटो रहेकाले उत्पादन राम्रो हुने गरेको वडा अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गौतम बताउनुहुन्छ ।
Tags: #मूल्य नपाउँदा उत्पादन रोकियो
गाजाबाट इजरायलतर्फ दुई रकेट प्रहार
उपत्यकामा ८०७ सहित १४७७ संक्रमित थपिए, २७९८ संक्रमणमुक्त